Business | Samadhan
Business	| October 4th |
पोखराबारे सकारात्मक सन्देश दिलाउने आश्वासन
Business	| October 2nd |
Leaveacomment	समाधान सम्वाददाता
भूकम्पका कारण खस्केको पर्यटन उद्योगलाई उकास्न सक्दो सहयोग गर्ने पोखरा आएको अष्ट्रेलियन टोलीले आश्वासन दिएको छ । पत्रकार सहित पाँच दिने नेपाल भ्रमणको आएको नौ सदस्यीय टोलीलाई पश्चिमाञ्चल होटल संघले विहिबार यहाँ स्वागत गर्दै यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी गराएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै टोलीकी एक सदस्य तालियाले नेपाल भन्ने वित्तिकै आफूहरुले पदयात्रा मात्र सम्झने गरेको तर यहाँ आएपछि पोखरा र वरपर धेरै पर्यटकीय सम्पदा र सुविधाहरु रहेको बताइन् ।
भूकम्पका कारण नेपाल नराम्रो गरी प्रभावित भएको हल्ला अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पुगेपनि पोखरा सुरक्षित र घुम्नलायक रहेको आफ्नो टोलीले पाएको उनले बताइन । यो खवर आफूहरुले अष्ट्रेलियामा आफ्ना साथीहरुसम्म पु¥याउने उनले आश्वासन दिइन । नेपाल सुन्दर रहेको र यहाँ थुप्रै पर्यटकीय आकर्षण रहेको जानकारी समेत आफूहरुले अष्ट्रेलियाली नागरिकसम्म पु¥याउने उनले बताइन् । टोलीका सदस्यले पोखरा सुन्दर, सफा र घुम्न लायक शहर रहेको आफूहरुले पाएका बताएका थिए ।
‘पोखरा निकै सुन्दर छ । यसबारे अहिलेसम्म नकारात्मक सन्देश फैलिएको छ । भूकम्प आएपनि पोखरा र आसपासका क्षेत्र सुरक्षित छन् । यसबारे हामीले सकारात्मक सन्देश फैलाउनेछौ’ उनले भनिन, ‘पोखरा आउन खोज्नेलाई त्रास होइन । आब उत्प्रेरणा दिनुपर्छ ।’ अस्टे«लियाका धेरै नागरिक नेपाल आउन चाहेपनि उनीहरु भूकम्प पछि केहि त्रसित भएको उनले बताइन ।
सो अवसरमा पोखराबारे जानकारी प्रस्तुत गर्दै नेपाल पर्यटन वोर्डका पूर्व सदस्य एवं पोखरा पर्यटन पुनर्जागरण समिति (पिटिआरसी)का प्रमोसन, सेल्स एण्ड मार्केटिङ संयोजक वासुदेव त्रिपाठीले अष्ट्रेलियाली नागरिकहरुबाट आफूहरुले रकम र पैसा भन्दा पनि पर्यटकको अपेक्षा गरेको बताए ।
‘तपाइँका साथीहरु अनि अष्ट्रेलियाली नागरिकलाई नेपाल घुम्न पठाइदिनुस’्, त्रिपाठीले भने, सबैभन्दा ठूलो सहयोग त्यही हुनेछ । पोखरा र वरपरको क्षेत्रको विशेषताबारे उनले कार्यक्रममा जानकारी गराएका थिए । संघका अध्यक्ष भरतराज पराजुलीले नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश अष्ट्रेलिया र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा फैलाइदिन टोलीसमक्ष आग्रह गरे । मिडियाले सकारात्मक सन्देश विश्ववजारमा फैलाइदिए मात्र पर्यटन अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश फैलाइदिन संचारकर्मीसँग आग्रह गरे । सो अवसरमा पराजुलीले संघले संचालन गर्दै आएका सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि गतिविधिबारे समेत जानकारी गराएका थिए । यसैगरी नेपालबाट थुप्रै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया अध्ययनका लागि गएको र जाने गरेको स्मरण गराउँदै उनले दुई देश विचको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण भएको बताए ।
सो अवसरमा संघका प्रथम उपाध्यक्ष विकल तुलाचनले अष्ट्रेलियाली पत्रकार र पर्यटकको टोलीलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताउँदै सकारात्मक सन्देश फैलाएर सहयोग गर्न
Business	| September 3rd |
पोखरा उद्योग वाणिज्य संघअन्तर्गतको महिला उद्यमी विकास समितिको आयोजना बिहीबारबाट महिला उद्यमी मेला आयोजना हुँदैछ । मेलाको तयारी पुरा भएको समितिका संयोजक बिन्दु कोइराला सुवेदीले जानकारी दिइन् । मेला २० गतेसम्म सञ्चालन हुने बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जानकारी दिइन् । पोखराको नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा मेला आयोजना हुँदैछ ।
आर्थिक सम्वृद्धिका लागि महिला उद्यमशीलता भन्ने नाराका साथ मेला आयोजना गरिएको हो । मेलामा रहने ८० वटा स्टल राखिएका छन् । सबै स्टल बुकिङ भइसकेको उनले बताइन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँगको समन्वयमा आयोजना गरिएको मेलामा महिला उद्यमीहरुद्वारा उत्पादित बस्तु तथा सेवाहरुको प्रदर्शनी र बिक्री, सीप एवं प्रविधी प्रवद्र्धन, हस्तकलाका बस्तुहरुको प्रदर्शनी, दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री र प्रदर्शनीका अलावा मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु समेत समावेश गरिनेछ ।
महोत्सव महिला उद्यमशीलता विकासको लागि आयोजना गरिएको र तीजको मुखमा आयोजित मेलामा नारीहरुले सस्तो मूल्यमा विभिन्न सामानहरु समेत किन्न पाउने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघकी कार्यसमिति सदस्य सीता गुरुङले जानकारी दिइन् । मेलाले पोखराको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान पु¥याउने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विन्दुकुमार थापाले बताए ।
आर्थिक दृष्टिमा कुन प्रदेश अब्बल ?
Business	| August 10th |
Leaveacomment	४ नं. प्रदेश पर्यटन, जलविद्युत,
संस्कृतिका हिसाबले अब्बल
समृद्धिका हिसाबले ४ नं. यो प्रदेश निकै भाग्यमानी बनेको छ । बागलुङ ढोरपाटनको एकमात्र शिकार आरक्ष यो प्रदेशमा परेको भए पर्यटनका हिसाबले अझै फलदायी हुन्थ्यो । तर अहिलेका लागि ढोरपाटन अर्काे प्रदेशमा परेको छ । त्यसबाहेक जलविद्युत उत्पादनमा यही प्रदेशमा सिंगो मुलुक निर्भर हुनेछ । हाल उत्पादन भएर वितरण भएको मध्ये करिब ६० प्रतिशत विद्युत प्रस्तावित यही प्रदेशभित्रबाट उत्पादन हुन्छ । आगामी दिनमा थप विद्युत उत्पादनका लागि पनि यहि प्रदेशमा धेरै सम्भावना र योजना अघि बढेका छन् । मादी, मोदी, कालिगण्डकी, बुढीगण्डकी, तनहुँ हाइड्रोलगायतका ठुला आयोजनाको काम यहि प्रदेशमा परेको छ । त्यसले पनि आगामी दिनमा यो प्रदेश विद्युतीय उत्पादनका हिसाबले सक्षम बन्नेछ ।
त्यसबाहेक नवलपरासीको पूर्वी भेग पनि यही प्रदेशमा गाभिएकाले गण्डक नहरबाट उत्पादन हुने विद्युत यसमै थपिनेछ । त्यस्तै रेमिटान्सको हिसाबले पनि यो क्षेत्र अब्बल छ । नवलपरासीको पूर्वी भेग पनि रेमिटान्सको लागि अग्रभागमा छ । त्यस्तै नवलपरासीको त्यही भेगमा औद्योगिकीकरणको प्रयाप्त सम्भावना पनि छ । यो प्रदेशमा हुने र नहुने बीचको अन्तर निकै कम छ । हुनेखाने र नहुनेबीचको अन्तर कम भएकाले भविश्यमा सबैलाई हुनेखाने बनाउन सहज छ । त्यस्तै पर्सा र चितवनसँग जोडिएको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको धेरै खण्ड नवलपरासीको पूर्वी भेगमा पर्ने र त्यहाँ पर्यटक पठाएर पनि यो प्रदेशलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका ठुला रिसोर्ट यही प्रदेशमा पर्ने भएकाले अर्काे पर्यटकीय सहर पोखरासँग जोडेर पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने गतिलो अवसर आउन सक्छ । धार्मिक पर्यटनको लागि चिनिएको त्रिवेणीदेखि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङसम्म पर्यटक पठाउन सकिन्छ । पोखरालाई राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडेर सिधै नवलपरासीको पूर्वि भेगमा जोड्न पनि सकिन्छ । पोखरा आफैमा पर्यटकीय आकर्षणको सहर भएकोले सौन्दर्यताका हिसाबले पनि यो प्रदेश अग्रभागमा पर्छ ।
त्यस्तै अन्य प्रदेश भन्दा सांस्कृतिक हिसाबले पनि यो क्षेत्र अब्बल हुने देखिएको छ । थारुनाच देखि हिमाली क्षेत्रको संस्कृतिलाइ पनि हामीले जोड्न सक्छौ । आर्थिक रुपमा सवल बनाउन यो प्रदेशले गतिलो अवसर पाएको छ । त्यसलाई अघि बढाउने जिम्मा राजनीतिक दलका नेतासँग छ । त्यसैले अबका नेताले यो प्रदेशलाई अब्बल बनाउनका लागि पहल गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलले सहि नेतृत्व लिएर काम गर्ने हो भने यो प्रदेश पहिलो नम्बरमा आउनेमा कुनै आशंका छैन । तर राजनीतिक दल सुझबुझपूर्ण तरिकाले काम गर्नुपर्छ ।
तत्कालका लागि भने सुदुरपश्चिम क्षेत्र अर्थात प्रदेश नं. ६ सबैभन्दा गरिब प्रदेश देखिन्छ । विकट पहाडी तथा हिमाली जिल्लाहरु भएका सुदुर पश्चिम प्रदेशको विकास गर्न निकै कठिन हुने र त्यो राज्य केन्द्र सरकारसँगको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
जुन ठाउँमा राजनीतिक चेत बढी छ, त्यहाँ जिम्मेवारी र जवाफदेहिता धेरै देख्न सकिन्छ । त्यस्ता संघहरु अघि बढ्न सक्छन् । त्यसपछि उनीहरुले केन्द्रलाई कचकच गर्छन् । र, विकास बजेट पनि खर्च गर्न सक्दैनन् । पूर्वतिरका मान्छेहरु बढी सचेत छन् । त्यहाँका संघहरु छिट्टै सम्मृद्धितर्फ अघि बढ्छन् । तराईको प्रवृत्ति चाहिँ केन्द्रबाट ल्याएर खानुपर्छ भन्ने छ । सुदुरपश्चिममा भौगोलिक विकटता र दूरदर्शी नेताहरुको खडेरी छ । तत्कालका लागि प्रदेश नं. ३ निकै अगाडि देखिन्छ । हामी संवेदनशील बन्यौं भने संघीयताले औषधिको काम गर्छ । तर, अहिलेकै जसरी अघि बढ्ने भो भने संघीयताले डुबाउँछ । साभार ः अनलाइनखबर
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
हामी उद्योगी व्यवसायीको सुझाव सकेसम्म सामथ्र्यका हिसाबबाट आर्थिक रुपमा सम्भव हुने गरी थोरै राज्य बनाउनुपर्छ भन्ने हो । तर, हामीले भन्दैमा दलहरुले मान्ने होइनन् । अहिले जुन ६ प्रदेश बनाउने मुख्य दलहरुबीच सम्झौता भएको छ, अब यी प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा सक्षम र सबल बनाउने खालको मोडल बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यी दुई क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आर्थिक कृयाकलाप हुन्छ । जहाँ बढी आर्थिक कृयाकलाप हुन्छ, त्यहाँ बढी रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । रोजगारी सिर्जना हुने वित्तिकै दक्ष अदक्ष जनशक्तिको आकर्षण पनि यही क्षेत्रमा हुने गर्छ । आजको दिनमा मात्र होइन, भोलिको दिनमा पनि २ र ३ नम्बर क्षेत्रमा बढी आर्थिक गतिविधि हुनेछन् । जहाँ आर्थिक गतिविधी बढी हुन्छ, त्यहाँको अर्थतन्त्रले फड्को मार्ने आधार बनाएको हुन्छ । मेरो विचारमा २ र ३ पछि सबैभन्दा बढी आर्थिक कृयाकलाप हुनेमा ५ नम्बर प्रदेश पर्छ । ४ र ६ नम्बर क्षेत्रमा २, ३ र ५ नम्बर क्षेत्रको तुलनामा कम आर्थिक कृयाकलाप हुन्छ । आर्थिक कृयाकलापको हिसावले १ नम्बर क्षेत्र पनि अब्बल देखिएको छ । झापा, मोरङ र सुनसरीमा धेरै आर्थिक गतिविधि हुने गर्छ । यस क्षेत्रको पहाडी इलाका अलैंचीलगायतका नगदे बालीका लागि प्रशिद्ध छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यही क्षेत्रमा पर्ने हुँदा पर्यटकीय हिसावले पनि यो क्षेत्र अगाडि देखिएको छ । अन्य ठूला हिमालहरु पनि यही क्षेत्रमा छन् ।
पाँच नम्बर क्षेत्र औद्योगिक हिसावले धेरै अगाडि रहेको छ । रुपन्देहीमा अहिले ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा छन् । सुनौली नाका भारतसँग जोडिने महत्वपूर्ण नाका मानिन्छ । यहाँबाट पनि ठूलो परिमाणमा कर संकलन हुन्छ । पर्यटनका हिसावले पनि यो क्षेत्र अगाडि देखिएको छ । विश्व शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी यही क्षेत्रमा पर्छ । जुन विश्वर प्रशिद्ध रहेको छ । विश्वभरका बौद्ध धर्मालम्बीहरुलाई लुम्बिनीमा ल्याउन सकिन्छ । बाँके, बर्दिया पनि पर्यटनका लागि पोटेन्सियल क्षेत्रमा मानिन्छ । यो क्षेत्रमा हाइड्रो पावर नभए पनि भोलिका दिनमा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ ।
मलाई ४ नम्बर प्रदेश निकै कमजोर जस्तो लागेको छ । नवलपरासीको थोरै भाग छुट्टाएर तराईसँग जोडे पनि यस क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप निकै कम हुने गर्छन् । उद्योग धन्दाहरु यस क्षेत्रमा नगन्य मात्रामा रहेका छन् । हाइड्रोपावरका हिसाबले केही सम्भावना देखिए पनि यहाँको अर्थतन्त्रमा माउन्टेनियरिङमा अडिएको छ । आर्थिक गतिविधिका हिसावले यो क्षेत्र मेरो बिचारमा पाँचौ नम्बरमा पर्छ ।
सरसर्ती हेर्दा प्रस्तावित प्रदेशहरु ठीकै लागेको छ । तत्कालका लागि केही प्रदेश कमजोर र केही बलियो देखिए पनि केन्द्र सरकारले व्यवस्थापन गरेर एक अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्यो भने धेरै राम्रो सबन्धको विकास हुनेछ । एउटा प्रदेशले गरेको राम्रो काम अर्को प्रदेशले सिक्न सक्छ, त्यसलाई सिको गर्न सक्छ । प्रादेशिक सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा अवसरहरहरु सिर्जना गर्न सक्छ । किनभने सबै प्रदेशमा उत्तिकै सम्भावनाहरु लुकेर रहेका छन् । यसका लागि राजनीतिक संस्कार र राष्ट्रहितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता भने चाहिन्छ ।
निजी क्षेत्रले शान्ति र स्थायित्व आउनुप¥यो, सहजरुपमा व्यवसाय गर्ने वातावरण बन्नुर्पयो भनिरहेका छौं । प्रदेश सरकार आएपछि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । व्यवसाय गर्ने वातावरण राम्रो बनाउन सकेमा सबैभन्दा धेरै सम्भावना ६ नम्बर प्रदेशमा देखिन्छ । २ र ३ त तत्कालका लागिमात्र सम्भावना भएका प्रदेश हुन् । ६ नम्बर प्रदेशमा जति सम्भावना छ, त्यसको सानो हिस्सा पनि उपयोग हुन सकेको छैन । राम्रो लिडर आयो भने ६ नम्बर प्रदेशको विकासका लागि लामो समय कुर्नुपर्दैन ।
होमडेलिभरी सुविधा दिँदै हाइजेनिक क्याफे
Business	| August 2nd |
Leaveacomment	 सन्तोष सुवेदी÷समाधान
पोखरा, १६ साउन।
के तपाई घरमा बसिबसि खाजाको खोजीमा हुनुहुन्छ ? अथवा क्वालीटि र हाइजेनिक खानाको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईको त्यो इच्छा अव पुरा हुने भएको छ । झण्डै एक महिना अघि सन्चालनमा आएको हाइजेनिक क्याफेले तपाईको अडर अनुसारको खाना घरमै डेलिभरी गर्दछ । पोखराको न्यूरोडमा खुलेको क्याफेलाई युवा व्यवसायी महेशराज कोइरालाले सञ्चालन गरेका हुन ।
थोरै रकममा क्यालिटी र हाइजेनिक खाना एउटै स्वादमा होम डेलिभरीको सुविधा रहेको छ । धेरै जनाको लागि प्याकेजको सिस्टम समेत रहेको क्याफे सन्चालनमा आएको छोटो समयमा नै राम्रो सुविधा दिँदै आएको छ । कामको व्यस्तताले गर्दा अफिस बाहिर निस्केर खाजा खान नपाउनेहरुको लागि उत्तम र समयको बचत समेत हुने हुँदा सबै बर्ग, क्षेत्रमा आवश्यक रहेको सञ्चालक कोइरालाले बताए । क्याफेमा कम्वोडिल (मिक्स) खानाको पनि सुविधा रहेको छ । स्पेशल कार्यक्रम देखि सेमिनारसम्म पनि भनेबमोजिम खानाको डेलिभरी हुने कोइरालको भनाई छ ।
विशेषत पोखराको न्यरोडका बैँकिङ्ग क्षेत्रलाई मुख्य बनाएर सञ्चालन गरेको क्याफेको प्रतिक्रिया राम्रो पाएको उनको भनाई छ ।
उक्त हाइजेनिक क्याफेमा बसेर खाना भने पाइँदैन किनकी क्याफे होम डेलिभरीको लागि मात्र रहेको कोइरालाले जानकारी दिए । एउटा किचनमा मात्र सीमित रहेर खोलिएको क्याफे पोखरामा नै पहिलो पटक रहेको उनको धारणा छ । ‘घरघरमा अडर गरे अनुसार समयमै हाइजेनिक खानाको व्यवस्था गर्नु नै हाम्रो मूख्य उदेश्य हो ’ उनले भने ।
पोखरा क्षेत्र भित्र होमडेलिभरी चार्ज नलागे पनि क्षेत्रबाहिर ५ प्रतिशतको दरले ट्रान्सपोटेसन चार्ज लिने गरेको उनको भनाई छ ।
झण्डै ५ लाख लगानीमा सन्चालन गरिएको क्याफेमा १ जना सेफ, २ कुक, र १ जना डेलिभरी व्याई गरी ४ जना स्टाफ रहेका छन् । पोखराको मुख्य सहर न्यूरोड, चिप्लेढुङ्गा, बगर, चाउथे, सिर्जनाचोक लगायतमा दैनिक होम डेलिभरी हुने गरेको कोइरालाले जानकारी दिए ।
थोरै लगानीमा सञ्चालन गरिएको क्याफेले मासिक झण्डै ३० हजारको हाराहारीमा आम्दानी भएको कोइरालाले अनुमान छ । उनी भन्छन, ‘सञ्चालन गरेको सुरुवातको समयमा यत्तिको आम्दानी हुनु राम्रो हो, यसलाई अझै विस्तार गर्दै लैजाने योजना छ ।’
लक्ष्य भन्दा २८ करोड बढी राजश्व
Business	| July 27th |
Leaveacomment	गोकुल बानियाँ
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराले आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ मा लक्ष्य भन्दा सात प्रतिशत बढि राजश्व संकलन गरेको छ । गत आर्थिक बर्ष तीन अर्ब ८२ करोड राजश्व संकलनको लक्ष्य राखेको कार्यालयले चार अर्ब १० करोड अर्थात् २८ करोड बढि राजश्व संकलन गरेको हो ।
यो अघिल्लो आर्थिक बर्षको भन्दा ७७ प्रतिशत बढी हो । आयकर तर्फ एक अर्ब ७० करोड लक्ष्य राखिएकोमा एक अर्ब ७७ करोड अर्थात् सात करोड बढि राजश्व असुली भएको छ । त्यस्तै मुल्य अभिबृद्धि कर अन्तर्गत ६७ करोड संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा सोहि बराबर असुली भएको कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत जगदिश्वर उपाध्यय बताए ।
अन्तशुल्क करबाट एक अर्ब ३८ करोड असुलीको लक्ष्य राखेको कार्यालयले २० करोड बढि अर्थात् एक अर्ब ५८ करोड संकलन गरेको छ । आव ०७१÷७२ बाट तनहुँमा सञ्चालनमा आएको सुर्य नेपाल प्रालिले मात्रै अन्तशुल्क तर्फ झण्डै एक अर्ब रुपैया राजश्व तिरेको छ ।
कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक बर्ष दुई अर्व ३० करोड मात्रै राजश्व संकलन गरेको थियो । राजश्व संकलनको केन्द्रिय स्थिति पनि खस्किएका बेला पोखराबाट भने १२५ प्रतिशत बृद्धिदर कायम राख्नु उपलब्धिपूर्ण रहेको उनले बताए । गत बर्ष राष्ट्रिय स्तरमा राजश्व संकलनको बृद्धिदर ११८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
सघन बजार अनुगमन, अनुसन्धान, टिडिएस भेरिफिकेसन, निजि क्षेत्रको सहयोग, सहकार्य तथा करदाता शिक्षा कार्यक्रमको प्रभाब स्वरुप करको दायरा बढाउन सफल भएको उपाध्ययले बताए ।
गत आर्थिक बर्ष गण्डकी र धौलागिरीमा १२ हजार ९ सय नयाँ करदाता थपिएका छन् । करको दायरामा नरहेकालाई पनि करको दायरामा ल्याउन सफल भएको कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ थपिएका अधिकांश साना करदाताहरु छन् ।
मासु पसल, तरकारी पसल, शिक्षक, ट्युसन सेण्टर लगायतलाई पनि करको दायरामा ल्याएको उनले बताए । यस क्षेत्रमा ८५ हजार करदाता छन् । गण्डकी र धौलागिरीका १० जिल्ला मध्य कास्कीमा मात्रै ५० प्रतिशत भन्दा बढी करदाता रहेका छन् । करको दर भन्दा पनि दायरा फराकिलो बनाउने लक्ष्य सहित चलाईएको अभियानले सबैलाई करको दायरामा ल्याउन सहयोग पु¥याएको कार्यालयले जनाएको छ ।
अझैपनि झण्डै १५ प्रतिशत करदाता करको दायरामा आउन बाकी रहेको कार्यालयको अनुमान छ । ‘अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गतका पर्यटन ब्यबशायीहरु झण्डै ५ सयको हाराहारीमा छन्, उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउने पहिलो प्रयास हुनेछ,’ उपाध्ययले भने । साना ब्यबशायीहरु, वर्कसप, ढुङ्गा कटिङ उद्योग, खुद्रा किराना पसलको सर्बेक्षणबाट डाटा तयार गरी कर तिर्ने बाताबरण बनाउने उनले बताए । उपाध्ययका अनुसार पोखरामा संचालित १५ प्रतिशत खुद्रा किराना पसल करको दायरा भन्दा बाहिर छन् ।
‘कर संकलनको क्रममा कैफियत देखिएकालाई कारबाही पनि गरिएको छ,’ उनले भने ‘करछल्नेमा ठुला देखि साना करदाता पनि छन् ।’ राजश्व संकलनमा यस क्षेत्रको योगदान तीन प्रतिशत मात्रै छ । देशभर ४९ वटा राजश्व कार्यालय रहेकोमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखरा १५ औं स्थानमा पर्छ ।
गण्डकी विकास बैंकको नाफा करिव १७ करोड
Business	| July 17th |
पोखराको न्यूरोडमा रहेको गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले आ.ब. २०७१÷०७२ को आषाढ मसान्त सम्ममा करिव १७ करोड रुपैया बराबरको संचालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । यस अवधिमा बैंकले रु ४ अर्व ५५ करोड निक्षेप संकलन गरी रु ३ अर्व ८६ करोड कर्जा लगानी गरेको सो बैंकले जनाएको छ ।
२०६१ सालवाट पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका विभिन्न १० जिल्लाहरुलाई आधार मानि प्रधान कार्यालय सहित २१ स्थानवाट गुणस्तरीय बैंकिङ्ग सुविधा प्रदान गर्दे आएको यस बैंकको हाल सम्म रु ३५ करोड २० लाख बराबरको चुक्ता पुँजि रहेको छ । बैंक संचालक समितिले मिति २०७२ श्रावण १६ गते बैंकको पुँजि वृद्धी प्रयोजनार्थ विशेष साधारण सभा को आह्वान गरेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छविन्द्र नाथ शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
ग्राहकहरुलाई सरल, सहज र सर्वसुलभ वित्तिय सेवा पु¥याउदै आएको यस बैंकले ग्राहकहरुलाई आधुनिक बैकिङ्ग सेवाहरु मोवाईल बैकिङ्ग, एटिएम, एविविएस, लकर र रेमिट्यान्स सेवाहरु उपलब्ध गराउदै आएको छ भने विभिन्न कर्जा शिर्षकहरुमा सरल र सहज तरीकाले छिटोछरितो रुपमा कर्जा उपलब्ध गराउनुका साथै निक्षेपमा आकर्षक ब्यजदर प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आगामी दिनहरुमा थप सेवा सुविधा विस्तार गर्दे लैजाने योजना बनाएको छ ।